सत्कर्म नबुझेकालाई कुलमानको फोटो घर घरमा टाँसी सवक सिकाऔं :पुर्व सचिव भिम उपाध्याय ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सत्कर्म नबुझेकालाई कुलमानको फोटो घर घरमा टाँसी सवक सिकाऔं :पुर्व सचिव भिम उपाध्याय !
काठमाण्डौं । नेपाल सरकारका पुर्व सचिव भिम उपाध्यायले कुलमानको फोटो घर घरमा टाँसी भ्रष्ट नेतृत्वलाई सवक सिकाउनको निम्ति सबैमा आह्वान गरेका छन् ।
उपाध्यायले पछिल्लो समय सामाजिक संजालबाट सबैलाई जागरुक बनाउँदै आएका छन् । उनीले मुलुक भरमा रहेका अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारहरुको खुलेर आँफ्नो सामाजिक संजाल फेस्बुकमा पोष्ट्याउँदै खबरदारी एवम सबैलाई जानकारी गराउँदै आएका छन् ।
उपाध्यायका कयौं फेस्बुक पोष्टहरु हेरी धेरैले गल्ती भएका कामहरु १/२ दिन भित्रमा फत्ते गरेका छन् । यी सबै उपाध्यायका पोष्टहरुका असरहरु हुन् । सामाजिक संजालमा लेखेको नै भरमा उपाध्यायलाई यो सरकारले छानबिनको लागि गिरफ्तार पनि गरेको थियो तर उनी सदैव सत्यको पक्षमा रहेको हुनाले छोडिदियो । त्यसपश्चात झनैं सक्रिय रुपले उपाध्याय संजालमा छाएका छन् ।
उपाध्यायको फेस्बुकमा लाख भन्दा माथी उनका समर्थकहरु फलो गरि जोडीएका छन् । धेरैले उपाध्यायको कामको प्रशंसा गर्दै आएका छन् । त्यस्तै सकारात्मक व्यक्तिहरुलो बारेमा उनले कहिँ कतै पनि लेख्न छुटाउँदैनन।
उपाध्यायले कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिनु अघावै सरकारलाई उनिलाई नै नियुक्ति दिलाउनु पर्छ भनी समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अहिले उपाध्याय भन्छन ,” घर घरमा कुलमान को फोटोहरु टाँसी नेतृत्वलाई लज्जाबोध गराऔं।”
उपाध्यायले आँफ्नो सामाजिक संजाल फेस्बुकमा यसरी लेखेका छन: “मान्नुहुन्छ भने मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ-
हरेक नेपालीको घरघरमा कुलमान घिसिंङको एउटा फोटो झुन्डाऔँ ताकि मुलुकलाई उज्यालो बनाउने पात्रको मात्र नेपालीलाई मतलब छ, कर्मयोगीलाई प्रोत्साहित गर्ने राजनीतिमात्र स्तुत्य छ, गफाडीहरूको दिन गए भन्ने ठूलो, गहन, गंभीर, कर्मयोगी बिकासात्मक राजनीतिक सन्देश देओस् ।”
पुर्व सचिव भिम उपाध्यायले गर्नुभएको पोष्ट जस्ताको तस्तै
Previous सिकिस्त श्रीमान सहित टेन्टभित्र २ महिने दुधे बालक बोकेकी सुत्केरी बिचल्लीमा, सहयोग लिएर पवित्रा लामा (हेर्नुहोस भिडियो)
Next रमेश प्रशाईले कुलमान घिसिङको विरोधी र सरकारलाई दिए यस्तो कडा चेतावनी ,(भिडियो सहित) हेरी ,शेयर गर्नुहोस।
10 mins ago Mechi Mahakali
30 mins ago मेचीमहाकाली संवाददाता